Body – Healthy Life Journal
ခန္ဓာကိုယ်အစိတ်အပိုင်းအချို့ ၏ အံ့ဖွယ်လုပ်ဆောင်ချက်များ
———၊ ဇွန်ခိုင်ဦး (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) ၊——— ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့  တချို့ အစိတ်အပိုင်းတွေက တခြားသူတွေထက် ပိုထူးဆန်းတဲ့ လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေ ရှိနေပါတယ်။ လျှာခင် (Uvlva) လည်ချောင်းနောက်မှာရှိတဲ့ လျှာခင်ကို လူအတော်များများ အလေးမထားမိတတ်ပါဘူး။ သီအိုရီတချို့ အရ လျှာခင်က လူတွေမှာပဲ...
ကိုယ်တွင်းအင်္ဂါအစိတ်အပိုင်းတွေ ကျန်းမာနေအောင် . . .
စူး (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) အာဟာရမျှမျှတတစားသောက်တာ၊ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တာ၊ ဆေးလိပ်/အရက် ရှောင်တာတွေကြောင့် ကျန်းမာရေးကို ကောင်းမွန်စေတယ်ဆိုတာ အကြမ်းဖျင်း သိရှိပြီးဖြစ်မှာပါ။ သင့်ခန္ဓာကိုယ် အင်္ဂါအစိတ်အပိုင်းအသီးသီး ကျန်းမာစေဖို့ ထူးထူးခြားခြား ဂရုစိုက်သင့်တဲ့အချက်တွေ ရှိပါတယ်။ မျက်လုံး ဗီတာမင်-ဒီ အလုံအလောက်ရရှိစေဖို့ နေခြည်နုနုကိုခံယူပေးပါ။ စိတ်ဖိစီးမှုကို လျှော့ချထားပါ။...
ဆရာဝန်နှင့် ပြသသင့်ပြီဟု သင့်ခန္ဓာကိုယ်က အချက်ပြနေသည့် သင်္ကေတများ
ဇွန်ခိုင်ဦး (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) ပုံမှန်လုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့အရာတွေကို လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်း မရှိတော့တာ၊ အပြုအမူနဲ့ စွမ်းဆောင်နိုင်စွမ်း သိသိသာသာ ပြောင်းလဲလာတာတွေဟာ အခြေခံကျန်းမာရေးပြဿနာရဲ့ သင်္ကေတတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ နေ့စဉ်လုပ်ဆောင်မှုတွေကနေ ပြသပေးနေတဲ့ သတိပေးလက္ခဏာတွေ ဖြစ်ပေါ်တဲ့အခါ ဆရာဝန်နဲ့ပြသဖို့ လိုအပ်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။ စင်ပေါ်ကို လက်လှမ်းမမှီခြင်း အရင်က လက်လှမ်းလို့မှီနေတဲ့စင်ရဲ့ ထိပ်ပိုင်းကို...
၊ ငွေကြယ်စင်ယံ ၊ သင်စားတဲ့ အစာအတိုင်း သင့်ခန္ဓာကိုယ် ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့စကားအတိုင်း သင့်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ အသံကိုနားထောင်ကြည့်ပြီး ဘယ်အစားအသောက်တွေက သင့်အတွက်အကောင်းဆုံး ဖြစ်မယ်ဆိုတာကို ဆုံးဖြတ်နိုင်မှာပါ။ (၁) အခွံမာသီး ဆားထည့်ပြီး ပြုပြင်မထားတဲ့ အခွံမာသီးတွေကို စားတာကြောင့် အာဟာရဓာတ်ရရှိပြီး စွမ်းအင်တိုးစေပါတယ်။ ဖြစ်နိုင်ရင်...
သင့်ခန္ဓာကိုယ်ကို ပြောင်းလဲပစ်နိုင်သည့် ယောဂကျင့်စဉ် ၁၅ မျိုး
လရိပ်မေ ယောဂ ပုံမှန်ကျင့်တာကြောင့် ရုပ်ပိုင်း၊ စိတ်ပိုင်းနဲ့ စိတ်ခံစားမှုပိုင်းတွေကို သိသိသာသာ ကောင်းမွန်စေပြီး ကျန်းမာကာ ခန္ဓာကိုယ် ဟန်ချက်ညီစေပါတယ်။ ယောဂစကျင့်မယ်သူတွေအတွက် လွယ်ကူထိရောက်တဲ့ နည်းလေးတွေ မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။ (၁) တြိဂံပုံကျင့်စဉ် ဒီကျင့်စဉ်က တစ်ကိုယ်လုံးကို အလုပ်လုပ်ဖြစ်စေပြီး ဆွဲဆန့်နိုင်အားနဲ့ သန်စွမ်းမှုအားကောင်းစေပါတယ်။...
တစ်ကိုယ်လုံး နာတာရှည် ကိုက်ခဲနာကျင်မှု ဝေဒနာခံစားနေရလျှင်
၊ ဇွန်ခိုင်ဦး ၊ (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) ကိုက်ခဲနာကျင်မှုဆိုတာ ရုတ်တရက်ဖြစ်ပေါ်တာရှိသလို လနဲ့ချီပြီး ဒါမှမဟုတ် နှစ်နဲ့ချီပြီးဖြစ်ပေါ်တဲ့ နာတာရှည်ကိုက်ခဲနာကျင်တဲ့ ဝေဒနာလည်းရှိပါတယ်။ နာတာရှည်ကိုက်ခဲနာကျင်တဲ့အခါ ခန္ဓာကိုယ်တင်မက စိတ်ခံစားမှုကိုလည်း ထိခိုက်စေပါတယ်။ (၁) ရေသောက်ပါ ပြေသ Mayo Clinic ရဲ့ လေ့လာမှုအရ...
တစ်ကိုယ်လုံး ညောင်းနေလို့ . . .
မေး. ညီမလေးလေ အခုတလော တအားညောင်းတာ၊ ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးကြီး ဘာဖြစ်ချင်မှန်းမသိဘူး။ ဗိုက်ကလေ တစ်ဖက်က အောင့်အောင့်လာတာ ညီမလေးကို ပြန်ဖြေပေးဦးနော်။ HanSu (FB) ဒေါက်တာမြတ်ထွဋ်ညွန့်မှ ဖြေကြားပေးပါသည်။ ဖြေ. ညောင်းညာကိုက်ခဲတာကတော့ အလုပ်အကိုင်၊ လူနေမှုပုံစံတွေကြောင့် ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ ဗိုက်အောင့်တာကတော့ အမျိုးမျိုးကြောင့်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။...